Ukubuka kabili kwe-Sophiens - room 15 (incl.breakfast) - I-Airbnb
Ukubuka kabili kwe-Sophiens - room 15 (incl.breakfast)
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Peter izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Ukuhlala esiqeshini somlando we-Bad Ischl. Yakhiwa ngo-1875 futhi yagcinwa isesimweni sayo sokuqala. INDAWO yokuhlangana ye-"Fin de Siècle". Ibekwe kahle, umbono omuhle we-panoramic. Indawo yokuqala yenoveli ethi "Doppelblick" ka-Alfred Komarek.
USophiens Doppelblick (ebunini bomndeni izizukulwane ezine)
Indlu ekhethekile ene-flair ekhethekile yezivakashi ezikhethekile.
Endlini kaSophiens Doppelblick, endaweni enelanga ngaphandle kwase-Bad Ischl, esiqongweni segquma, kusenesigqi esihlukile namuhla, umbono oyingqayizivele wesikhathi nemvelo. Kude nempilo yansuku zonke kanye nokuphithizela esigodini, kusekhona ukuthinta kwe-nostalgia lapha.
U-Archduchess Sophie (umama woMbusi uFranz Joseph I) wanikeza le ndawo ekhethekile igama elithi "Doppelblick". Wakhangwa umbono omangalisayo futhi wakhetha le ndawo ukuba aphumule futhi aphumule.
Indlu, eyakhiwa ngo-1875, igcinwe ngesitayela sayo sokuqala nesitayela kuze kube yilolu suku, kodwa ngokuthakazelisa kwayo nokulula ihoxiswa ngokuphelele kusukela namuhla.
Lapho ababhali, abaculi, izicukuthwane kanye namalungu eNdlu yaseHabsburg babevame ukuyochitha ihlobo noma bevakashele, labo abafuna ukuthula nokuthula kanye nabathandi bemvelo basengathola ithuba lokuhlehla baphumule namuhla.
Maphakathi ne-Salzkammergut, indlu iyisikhungo esikahle sokuhamba izintaba, imidlalo yasemanzini, ukubuka indawo kanye nohambo lwezokupheka.
Itholakala emaphandleni, ngenhla nje kweKaiservilla kanye neKaiserpark. Ungalindela ukubuka okuhlukile kwe-panoramic ngasendleleni yeLake Wolfgang kuya e-Dachstein glacier.
Ngiyajabula futhi ukunikeza amathiphu ohambo.